Kpido: njirimara nnweta okike » Martech Zone
Tag: onye ọrụ nweta ihe
Ịgụ Oge: 7 nkeji E nwere ọtụtụ ụzọ iji melite arụmọrụ mkpọsa. Ihe niile site na agba na oku iji mee ihe iji nwalee usoro ọhụụ nwere ike inye gị nsonaazụ kacha mma. Mana nke ahụ apụtaghị na njikarịcha njikarịcha UA (Ntuziaka Onye Ọrụ) ị ga-agafe ga-aba uru. Nke a bụ eziokwu ọkachasị ma ọ bụrụ na inwee ọgaranya. Ọ bụrụ na ịnọ n’obere otu, ma ọ bụ na ị nwere nsogbu mmefu ego ma ọ bụ oge mgbochi, mmachi ndị ahụ ga-egbochi gị ịnwale